အိမ်အတွက်လက်မှုပညာ - လက်မှုပညာ On | လက်မှုပညာစာမျက်နှာ (စာမျက်နှာ ၂)
ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက၊ ဤနေရာတွင် ဖန်အိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အိုးသေးသေးလေးနှင့် အလွန်ရှေးကျသော သစ်သားအထောက်အပံများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ကျောက် cacti အပြည့်ပါသောအိုးလုပ်ခြင်းကိုပျော်ပျော်လုပ်ပါ။ သူတို့သည်ကလေးများနှင့်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ပြီးပြည့်စုံပြီးဖျော်ဖြေမှုများနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သည်။
အိပ်ခန်းတွေကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်ထိုင်ခုံကုလားထိုင် (သို့) မီးခွက်လိုမျိုးကွဲပြားတဲ့အရာတွေကို ၀ ယ်တာကနေရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဖန်ပုလင်း၊ အ ၀ တ်အချို့၊ ကတ်ထူပြားနှင့်ကူရှင်များအတွက်အိမ်၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်ဖြင့်အပ်ချုပ်သေတ္တာကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
ဆောင်း ဦး တွင်အလှဆင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသော centerpieces များ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်တော့မယ်၊ ငါတို့ကအိမ်အလှဆင်တာကိုပြောင်းချင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်အသုံးပြုလက်မှုပညာ၏စိတ်ကူး ၅ ချက်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုပြီးပန်းကန်လုံးများတွင်လှပသောရနံ့ရှိသောဖယောင်းတိုင်များပြုလုပ်နည်းကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်လက်ဆောင်များအဖြစ်အလှဆင်ရန်နှင့်လက်ဆောင်ပေးရန်မူလနှင့်အထူးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျော်ပျော်နေပါ
အလှဆင်ထားသောရေခဲမုန့်ချောင်းဖယောင်းတိုင်ကိုဖန်တီးခြင်းသည်လွယ်ကူ။ စျေးမကြီးပါ၊ အိမ်တွင်ဖန်တီးမှုအချိန်အနည်းငယ်ရှိရန်စံပြလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
boho ပုံစံပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလှဆင်ရန်လက်မှုပညာ ၅ ခု
လွယ်ကူသောအလှဆင် boho ပန်းချီကား
ဤအ ၀ တ်ဗီရိုရနံ့အိတ်များသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရနံ့များနှင့်အ ၀ တ်များကို ၀ တ်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးသဘာဝလေသန့်စက်ဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းသောသစ်သားချောင်းများနှင့် acrylic သုတ်ဆေးလေးများပါ ၀ င်သောစပျစ်သီးသိုလှောင်ရုံတစ်ခုကိုမည်သို့လှပကြည့်ရှုနိုင်မည်ကိုလေ့လာပါ။
စက္ကူသို့မဟုတ်ရော်ဘာအမြှုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ပန်း ၇ ပွင့်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့မင်းတို့ပန်းတွေလုပ်တဲ့နည်း ၇ နည်းကိုယူလာတယ်။ စက္ကူ၊ စက္ကူစသည့်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများရှာဖွေနိုင်သည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီပန်းချီကားမှာဒီအရုပ်ကိုအိုးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ နည်းလမ်းလား ...
အိမ်သာသုံးစက္ကူနှင့်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေသောစာသင်ခန်း ၅ ခု
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာမင်းကိုဥယျာဉ်အတွက်အကြံဥာဏ်သစ်တစ်ခုပေးတယ်။ လုပ်ကြရအောင် ...
ပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုရှိအိမ်ပြင်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလက်မှုပညာ ၅ ခု
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ရာသီဥတုကောင်းမွန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များ၏အပြင်ဘက်areasရိယာများတွင် ၀ င်ရောက်လိုသောကြောင့်သင်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရာ ၀ တ္ထုကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးရန်လက်မှုပညာအတွေးအခေါ် ၄ ခု
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာဒီရယ်စရာဥယျာဉ်မှအမျိုးသမီးကောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ သူတို့ဟာကောင်းတယ် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာရိုးရှင်းတဲ့ macrame မှန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားတွေ့မှာပါ။ ဒီကြေးမုံ ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ငါတို့ဥယျာဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ယူလာသည်။ ဇုန်တစ်ခုလုပ်ပုံကိုကြည့်ကြရအောင် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့ pompoms နဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ကုလားကာကိုဘယ်လိုအလှဆင်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ရမယ်။ ဟုတ်လား
နွေ ဦး ရာသီ၌အလှဆင်ဖို့5လက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့နွေ ဦး ရာသီမှာငါတို့အိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့မင်းအတွက်အကြံဥာဏ် ၅ ခုယူလာပေးတယ်။ သူတို့ကအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လက်မှုပညာဖြစ်ကြသည် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာဘောင်ကိုကြိုးနဲ့သိုးမွှေးနဲ့ဘယ်လိုအလှဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်။ ဒါဟာ ...
အလှဆင်ဖို့စုံလင်သောကြိုးနှင့်အတူ6လက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်မှုပညာဆိုင်ရာအကြံဥာဏ် (၆) ခုယူဆောင်လာပါမည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာဒီလှပတဲ့ဖယောင်းတိုင်ကိုဖော့ဆို့နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ဟုတ်လား
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌အလှဆင်ဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! အအေးမိခြင်းနှင့်အတူ, သင်အဘို့, အိမ်၏အထူးသဖြင့် living ည့်ခန်း၏အလှဆင်ပြောင်းလဲပစ်ချင် ...
အိမ်အတွက်4လက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ပို့စ်မှာငါတို့အိမ်အတွက်စံပြလက်မှုပညာလေးခုကိုပြမယ်။ ကွဲပြားခြားနားသည် ...
စက္ကူနှင့် / သို့မဟုတ်ကတ်ထူပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသောပန်းများ ၅ ခု
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာမင်းကိုစက္ကူနှင့် / သို့မဟုတ်ကတ်ထူပြားများဖြင့်ပန်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်နည်းလမ်း ၅ ခုကိုငါတို့ဆီသို့ယူဆောင်လာသည်။
အိမ်အတွက်ဖယောင်းတိုင် ၅ မျိုး
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာအိမ်အတွက်ဖယောင်းတိုင် ၅ ခုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာအိပ်ခန်းဟောင်းတစ်လုံးကိုဘယ်လိုပြန်လည်ပြုပြင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာဒီmacraméအမျိုးအစားထည်ကုလားကာကိုလုပ်ရတော့မယ်။ ဒါဟာအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! နွေရာသီရောက်လာပြီနှင့်အတူအပူ။ ဒီတော့ဒီနေ့မင်းတို့ကိုတချို့ပေးတော့မယ်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်ယာဉ်မှာဒီလှပသောကြိုးတံခါးကိုကိုင်ဆောင်ထားလိမ့်မယ်။ ဒါကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာငါတို့ဟာဒီလှပတဲ့စိုက်ခင်းကိုရေပုံးဘူးဟောင်းတစ်စီးနဲ့လုပ်ကြမယ်။ အဲဒါစံပြပါပဲ။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဤလက်မှုပညာသည်သော့များကိုစတင်အသုံးပြုသောကလေးများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတို့ကိုခွဲခြားနိုင်ရန် ...
ကျန်ကြွင်းသောအရာများအတွက် pallets နှင့်အတူဆိုဖာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ပေါ်အလှဆင်ဖို့3မူရင်း bookends
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီယာဉ်မှာဒီလှပတဲ့ပန်းကုံးကိုလုပ်မယ်။ လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ် ...
ဒီယာဉ်ဟာအချည်းနှီးဖြစ်နေပုံရသည့်ထိုထောင့်ကိုအလှဆင်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဒါဟာမြို့ပတ်ရထားပုံသဏ္withာန်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီခေတ်မှာငါတို့ကဖော့ဆပ်ပြာသုံးခွက်ကိုလုပ်ကြမယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကွဲပြားခြားနား။ သူတို့ကအရမ်း…
သင့်အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်ဤအလင်းရောင်ပုလင်းကိုမလွတ်ပါစေနှင့်။ ၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးရလဒ်ကောင်းများအတွက် ၂ မိနစ်သာလိုလိမ့်မည်။
diy နှင့်ဂေဟစနစ်အိမ်သာ pads
ထူအီဗာရော်ဘာနှင့်အတူ XNUMX ဂိမ်း
ဤ tic-tac-toe ဂိမ်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးကလေးများသည်လည်းသူတို့အတွက်သူတို့လုပ်ထားသည့်အရာနှင့်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
သင်အထူးသီးသန့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွက်လက်ဆောင်များခြုံရန်မူလနည်းလမ်းလေးခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှလက်ဆောင်ကြံစည်ခဲ့ ...
လိမ္မော်ရောင်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီများကို အသုံးပြု၍ အရေးပေါ်ဖယောင်းတိုင်ကိုယနေ့ပြုလုပ်သည်။ အရမ်းနေတယ်
ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပြီးအထူးသဖြင့်အပူရှိန်ရှိသောခြင်များသည် ပို၍ တက်ကြွကြသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သွား ...
ယနေ့ခေတ်ယာဉ်တွင်ဘောင်းဘီအချို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးစုံသောအိတ်တစ်ခုပြုလုပ်ပါမည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်း။ အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လက်စွပ်များအတွက်လက် ၀ တ်ရတနာသေတ္တာ၊ လှပပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်နည်းလမ်း
Eyeshadow palette: မိတ်ကပ်အရိပ်များကိုမှာယူရန်စိတ်ကူးတစ်ခု
တစ် ဦး ချင်းရာဘာအ ၀ တ်အထည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
သင့်မှာရော်ဘာအ ၀ တ်အစားများပျက်စီးသွားပါသလား အကယ်စင်စစ်တစ် ဦး ချင်းစီစားပွဲပေါ်မှာလုပ်ဖို့သုံးနိုငျသောအခြို့သောအစိတ်အပိုင်းရှိပါသည် ...
စတော်ဘယ်ရီ box ကိုပြန်လည် trivet ထမြောက်တော်မူ
အိမ်တစ်လုံးရှိခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်သည်တစ်ခါတစ်ရံစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်လုပ် humidifier နှင့်အခြားလှည့်စားမှုများပြုလုပ်မည်။
ရေမွှေးနှင့်အတူရေဘဝဲ၏ယာဉ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြချက်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ပစ္စည်းများ, ဓာတ်ပုံများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏သတင်းအချက်အလက်။
ဒီရက်သတ္တပတ်များရာသီဥတုကောင်းမွန်သောကြောင့်အိမ်၏အပြင်အဆင်ကိုနွေ ဦး ပေါက်ရာသီအတွက်အနည်းငယ်သင်ပြောင်းလဲလိုသည်။
ရော့ခ် bookends, လုပ်ဖို့အမြန်
ဒီလက်မှုပညာမှာငါတို့ဟာmacraméနည်းစနစ်ကိုသုံးပြီးအမွေးအတောင်တစ်ခုလုပ်ဖို့သွားမယ်။ ဒီကလောင်အတွက် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အတွက်ကာစရာပလပ်စတစ်အိုးတစ်လုံးပြုလုပ်ရန်ရှင်းလင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များချွေတာခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သစ်သားသေတ္တာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်ငှက်ဥအိမ်တစ်ခုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဝိုင်တစ်ဘူး၏အားသာချက်ကိုယူ။
ပန်းများသည်ပန်းချီလုပ်ငန်းများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒီ post မှာပန်းသုံးပွင့်ကိုငါပြမယ်။
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်၍ သစ်သားပြားမှမည်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုမဆိုမည်သို့ယူရမည်နည်း။
သံကိုအသုံးပြု။ အရေးအကြောင်းတွေမပါဘဲ decoupage အောင်ဘယ်လို။
Decoupage ဆိုသည်မှာကော်နှင့်ကပ်ထားသောလက်သုတ်ပုဝါများဖြင့်ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေဒီနေ့လည်ခင်းကရှုပ်ထွေးပြီးသူတို့ထွက်သွားတယ်။ ပန်းကန်မရှိဘဲ Decoupage နည်းစနစ်ကိုလုပ်တတ်အောင်သင်ယူပါ၊ မည်သည့်မျက်နှာပြင်အတွက်မဆိုအဆင်ပြေပြီး၎င်းသည်အရေးမပါဘဲကျန်ရှိနေသောကြောင့်ရလဒ်မှာကောင်းမွန်သည်။
ကျနော်တို့ခရစ်စမတ်အတွေးအခေါ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဒီတစ်ခါတော့အိမ်သာသုံးစက္ကူပြွန်ကိုအသုံးပြုတဲ့လက်မှုပညာသုံးခုကိုသင်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီလက်မှုပစ္စည်းများကိုအိမ်သုံးစက္ကူပြွန်များဖြင့် ပြုလုပ်၍ သင်၏ခရစ်စမတ်ကိုအလှဆင်ရန်နှင့်ဤအားလပ်ရက်ရာသီ၌သင့်အိမ်သို့ထူးခြားသောထိတွေ့မှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ လွယ်ကူစွာပြန်သုံးပါ။
ကတ်ထူသေတ္တာများပြန်လည်အသုံးပြုရန်ခရစ္စမတ်လက်မှု ၂ ခု။
ဒီနေ့ပို့စ်မှာတော့ခရစ်စမတ်ဓာတ်ပုံ ၂ ဘောင်လုပ်ဖို့ကတ်ထူဘူးတွေကိုဘယ်လိုပြန်သုံးရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားမှာပါ။ သင့်အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်ခရစ်စမတ်လက်မှုပစ္စည်းများကိုခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များပြုလုပ်ရန်ကတ်ထူပြားများကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။
ပြန်လည်အသုံးချခြင်းနှင့်အတူခရစ်စမတ်များအတွက်လက်မှုပညာ။3ခရစ္စမတ်အလှဆင်
ယနေ့ခေတ်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်တွင်ရှိသည့်အရာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ခရစ်စမတ်ခရစ် (၃) ခုပြုလုပ်နည်းကိုသင်ပေးပါမည်။ သူတို့သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးခရစ်စမတ်တွင်သင်၏အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်ဤခရစ်စမတ်အလှဆင်မှုများပြုလုပ်နည်းကိုသင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သင့်အိမ်၌ရှိသည့်အရာများကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ငွေကြေးများစွာကုန်ကျမည်မဟုတ်။
ခရစ်စမတ်၏အရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာသစ်ပင်များဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေကျတော့အိမ်မှာနေရာမရှိဘူး၊ ဒီ post မှာတော့ဒီခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုသီးနှံသေတ္တာများမှကတ်ထူပြားကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာသွားမှာပါ။ အိမ်ငယ်များအတွက်နေရာမှာနေရာမယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ပို့စ်မှာကျွန်တော်ဟာစူပါလွယ်ကူပြီးဈေးသိပ်မကြီးတဲ့ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာတစ်ခုကိုအိမ်သာဒါမှမဟုတ်မီးဖိုချောင်သုံးစက္ကူတွေကနေပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပြပါမယ်။ အိမ်သာသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်သုံးစက္ကူများမှကတ်ထူပြားများပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဤခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။
ခရစ်စမတ်အတွက်စီဒီတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ။ Elf Santa Claus
ဒီနေ့ပို့စ်မှာသင့်ကိုသင်အိမ်မှာရှိသည့် cds သို့မဟုတ် discs များကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်သင်ယူနိုင်သည့်အကြံဥာဏ်သစ်တစ်ခုယူလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် cd သို့မဟုတ် dvd ကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်နှင့် Santa Claus ၏ elf သို့မဟုတ် elf ကိုအလှဆင်ရန်အတွက်သင်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ္စမတ်နှင့်ကစူပါမူရင်းထိတွေ့ပေးပါ။
ဖန်ခွက်အိုးပြန်သုံးနည်း။3လွယ်ကူသောအတွေးအခေါ်များ
ဒီနေ့ပို့စ်မှာငါတို့ဖန်အိုးတွေကိုဘယ်လိုပြန်သုံးရမလဲဆိုတာလေ့လာသွားမယ်၊ ကြီးကျယ်တဲ့အတွေးအခေါ် (၃) ခုဖန်တီးတော့မယ်။
စက္ကူပန်းများသည်ပါတီအားလုံးအလှဆင်ခြင်း၊ မွေးနေ့များ၊ နွေ ဦး စသည်တို့ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းအားလုံးတွင်အသုံးအများဆုံးလက်မှုပညာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၅ မိနစ်အတွင်းဤစက္ကူပန်းများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာသည်။ ။
လူမီနီယံဘူးခွံများပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။ အစပြုသူအတွက် Decoupage
ဒီ post မှာတော့လူမီနီယမ်သံဗူးကိုဘယ်လိုပြန်သုံးရမလဲ၊ ပြီးတော့ဒီဖက်ရှင်ကျလှတဲ့စတိုင်လ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးမယ်။ သူတို့ကိုခဲတံတစ်ချောင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဒီကန ဦး နည်းပြသင်ခန်းစာနဲ့ဒီယိုဂ့်ဒီယို (Decoupage) နည်းစနစ်ကိုသုံးပြီးအလူမီနီယံဘူးများကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။
Eva ရော်ဘာနှင့်အတူ3အတန်းထဲတွင် piggy လုပ်နည်း
၃ တန်းတစ်တန်းသည်ကလေးများအလွန်နှစ်သက်သောရိုးရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကစားရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကစားရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီ post မှာတော့ Eva Rubber နဲ့ဝက်ပုံသဏ္inာန်ကိုအတန်းထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးမယ်။ အိမ်ထဲမှာကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကစားနည်းဖြစ်မယ်။ သူတို့ကပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ !!
ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ဖက်ရှင်ကျသည်။ ဤပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သံဖြူသံဗူးများကိုမည်သို့ပြန်လည်အသုံးချရမည်နှင့်၎င်းကိုလက်ဆောင်သေတ္တာများအဖြစ်မူလအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်မည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးမည်။ ဤသံဖြူသို့မဟုတ်အလူမီနီယမ်ဖြူကိုမည်သို့ပြန်လည်အသုံးချရမည်ကိုလေ့လာပြီး၎င်းကိုမူရင်းလက်ဆောင်သေတ္တာတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အထူးသင်ကြားပေးမည်။
ဤစာမူ၌ကတ်ထူအိမ်သာစက္ကူပြွန်များကိုမည်သို့ပြန်လည်အသုံးချရမည်နှင့်၎င်းကိုနွေရာသီတွင်သင်၏အိမ်ကိုအလှဆင်နိုင်သည့်ဟာဝိုင်အီကျွန်းသို့မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုသင့်အားသင်ပြမည်။ ဤသည်ဟာဝိုင်အီကျွန်းကိုအိမ်သာနှင့်မီးဖိုချောင်စက္ကူများဖြင့် ပြုလုပ်၍ သင်၏အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်ကလေးများအတွက်အလွန်ပူပြင်းသောထိတွေ့မှုကိုပြုလုပ်သည်။
သင်၏အခန်းကိုအီဗာရော်ဘာပေါင်နှင့် pompoms ဖြင့်အလှဆင်ပါ
ဤစာအုပ်သည်ကလေးများနှင့်ပါတီပွဲများကိုအလှဆင်ရန်လူကြိုက်များသည်။ ဒီပို့စ်မှာဒီငွေကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းကဏ္ or နဲ့သင့်အိမ်ရဲ့ဘယ်ထောင့်ကိုမဆိုပစ္စည်းအနည်းငယ်နဲ့အလှဆင်နိုင်ဖို့ဒီစုံစုံလင်လင်ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာလေ့လာပါ။
၅ မိနစ်အတွင်းသင်၏မျက်မှန်ကိုသစ်သားတုတ်ဖြင့် DIY ပြသပါ
လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပြသခြင်းများသည်အိမ်အားလုံး၏ခန်းများ၌အကျယ်ဆုံးသောအလှဆင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဒီ post မှာတော့ငါဒီ display ကိုသစ်သားတုတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုအခန်းလုပ်ရမလဲ၊ သင့်အခန်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအလှဆင်ရန်နှင့်သင်၏မျက်မှန်များသို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာများကိုနေရာချရန်လေ့လာမည်။
ငါမင်းကိုချစ်တဲ့ hama ပုတီးသတင်းစကားနဲ့သော့
သင်၏သော့သို့မဟုတ်ကျောပိုးအိတ်ကိုအလှဆင်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနွေရာသီတွင်ကလေးများနှင့်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး hama ပုတီးဖြင့်ဤသော့ချိတ်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
pyrography နှင့်အရောင်နှင့်အတူသစ်သား bookmarks
အားလပ်ရက်မှာစာအုပ်တွေအတွက်ဒီအမှတ်အသားကို pyrography နည်းနဲ့ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာလေ့လာပါ။
မိခင်များနေ့အတွက်လက်ဆောင်များအတွက် Decoupage coasters
Decoupage ဖြင့်အလှဆင်ထားသောဤသစ်သားကမ်းရိုးတန်းများကိုသင့်မိခင်အားပေးဆပ်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံအောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ သူမချစ်မည်မှာသေချာသည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအားလပ်ရက်များထဲမှဓါတ်ပုံများကိုမည်သို့ စုစည်း၍ သင်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည့်ဤအခိုက်အတန့်များကိုမှတ်သားရန်ဤအယ်လ်ဘမ်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုလေ့လာပါ။
ဒီပိုစတာကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ၊ အခန်းရဲ့တံခါးကိုအလှဆင်နိုင်ဖို့နဲ့နွေ ဦး ရာသီထိရောက်အောင်ဒီစုံတွဲအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ခြင်းခံခြင်း (သို့) ကလေးရေချိုးခန်း ၀ တ်ဆင်ခြင်းနှင့်သင်၏ guests ည့်သည်များအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေးနိုင်ရန်ဤစုံလင်သောအမှတ်တရလက်ဆောင်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
ရိုးရှင်းသောမျက်မမြင်တစ် ဦး ကိုအထူးနှင့်ထူးခြားသည့်တစ်ခုအဖြစ်သင်မည်သို့လိုအပ်သည်နှင့်အညီပြောင်းလဲမည်၊ သင့်ကိုကူညီနိုင်မည့်အတွေးအခေါ်များဖြင့်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
ပန်းချီကားနှင့်ကတ်ထူပြား သုံး၍ ကလေးတစ် ဦး ပန်းချီဆွဲနည်း
ဒီ post မှာတော့ယောက်ျားလေး (သို့) မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အခန်းကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်ဒီစုံလင်တဲ့ကလေးတံခါးကိုချိတ်ဆွဲရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုငါပြမယ်။
ယနေ့ခေတ်ပုံတွင်နှလုံးပုံသဏ္ဌာန်လန်းဆန်းစေသည့်နည်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။ Valentine's Day သည်အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမွှေးနံ့သာများနှင့်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလက်တွေ့ကျပြီးအလှဆင်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်မည်ကိုငါပြသည်။
ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူတစ် ဦး သည်တူနာတစ်ဘူးကိုမည်သို့ပြန်လည်အသုံးချရမည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ လုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးချွေတာတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဖန်ခွက်ကိုမည်သို့ပြန်လည်အသုံးပြုရမည်၊ ၎င်းကိုခဲတံသို့မဟုတ်ခဲတံကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ယခုသင်တန်းစတင်နေပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စားပွဲခုံကိုအလှဆင်လိုသည့်အခါ
ဆီမီးခွက်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် chandelier ပြုလုပ်နည်း
ဆီမီးခွက်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင် chandelier ပြုလုပ်နည်းကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့၊ သင်အသုံးမပြုတော့သောသင်နှင့်သင်မဖယ်ရှားလိုသည့်မီးခွက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံအသုံးပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။
နွေရာသီတွင်သင်၏ရေခဲသေတ္တာကိုအလှဆင်ရန် Kawaii cactus magnet
ဒီနွေရာသီမှာသင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာကိုအလှဆင်ရန်နှင့်မူလထိတွေ့မှုကိုပေးဖို့ဒီ kawaii သံလိုက် eva ရာဘာကျူတာကိုဘယ်လိုပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။
DIY ပန်းပွင့်အလှဆင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ပန်းပွင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
DIY အိုးအလှဆင်ခြင်းဖြင့်သင့်အားဘာမှမပြောသောထိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအိုးကိုအသွင်ပြောင်း။ ပို၍ ပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်အိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒီသံလိုက်ကိုရေခဲမုန့်ပုံသဏ္inာန်နဲ့ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။ ဒီနွေရာသီမှာအိမ်မှာရေခဲသေတ္တာ (သို့) ရေခဲသေတ္တာကို eva foam နဲ့အလှဆင်ဖို့လေ့လာပါ။
ကလေးများအတွက် pompoms နှင့်အတူသိုးသော့
အလွန်လွယ်ကူသော pompoms များကို အသုံးပြု၍ ဤသိုးသော့ချိတ်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်ရန်လေ့လာပါ၊ ကလေးကျောပိုးအိတ်များကိုအလှဆင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။
အချိန်စုဆောင်းခြင်းအပြင်အဖွဲ့အစည်းကသင့်အတွက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်အဆိုပြုချက်တစ်ခု - ကျွန်ုပ်သည်အပတ်စဉ်မီနူးတစ်ခုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြသမည်။
ဖန်ခွက်အိုးတလုံးနှင့်အတူကလေးတစ်ကောင် fishbow လုပ်နည်း
သင်၏မိုဘိုင်းအတွက်ခံစားမှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်မိုဘိုင်းအတွက် Kawaii Cloud Cover
ဤမိုဘိုင်းအိတ်ငယ်ကိုခံစားမှုနှင့် kawaii စတိုင်များဖြင့် ပြုလုပ်၍ ကလေးများအတွက်အလွန်ကောင်းသောစူပါမူရင်းမိုcloud်းတိမ်ဖြင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
အလှဆင် motif သင်ခန်းစာ
ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာရင်ခုန်စရာကောင်းသောလှပသောဖန်ခွက်အိုးတစ်ဘူးသို့မဟုတ်ပုလင်းတစ်လုံးဖြင့်အလှဆင် motif တစ်ခုပြုလုပ်ပုံကိုသင်ပြသည်။
သင်၏ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုအီဗာရော်ဘာဖြင့်အလှဆင်ရန် Santa Claus
eva foam ကို သုံး၍ သင်၏ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုအလှဆင်ရန် Santa Claus ၏ပုံစံ၌ဤအဆင်တန်ဆာကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ဖို့စံပြ။
ဒီသင်ခန်းစာမှာကြော့ဖောင်းတဲ့ကမ်းခြေအချို့ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ သို့သော်သင်ကဖယောင်းစက္ကူအချို့လိုအပ်သည်။
ဒီမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုင်ဆောင်သူကိုခရစ္စမတ်တွင်သင်၏စားပွဲကိုအလှဆင်ရန်နှင့်အလွန်ကြော့။ မူရင်းပြုလုပ်ရန်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါ။ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများနှင့်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။
ခရစ္စမတ်အတွက် snowman နှင့်အတူမှတ်စုကိုင်ဆောင်သူ
ဒီကနေ့ငါမင်းကို DIY အသစ်တစ်ခုယူလာပါပြီ။ ငါတို့က infusions အတွက်အိုးတွေလုပ်မယ်။ ၄ င်းတို့ကိုဖန်သားအိုးများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ဖန်ခွက်အိုးအချို့ကိုအသုံးချခြင်း။
ဤ DIY ဖြင့်သင်၏အိမ်အတွက်အသေးစိတ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ခေတ်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲတော်သည်သင်တို့အတွက်အဆင်ပြေစေမည့်အလှဆင်ဖရုံသီးတစ်ခုပြုလုပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားပါမည်။
keychain tassel ပြုလုပ်နည်း
ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာ keychain တစ်ခုအတွက် tassel ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာမယ်။ ရလဒ်ကတော့မင်းကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာအိုးကိုအလှဆင်ဖို့၊ ပျော်စရာကောင်းပြီးမူလထိတွေ့မှုအတွက်ဝါယာကြိုးပန်းတစ်ချောင်းဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ အရောင်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောပန်းများကိုဖန်တီးပါ။
Kawaii လက်မှုပညာ။ ကွတ်ကီးသော့ချိတ်
ဒီ kawaii cookie-shaped သော့ချက်အီဗာရာဘာဖြင့်လွယ်ကူစွာမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ရလဒ်ကတော့လှပ၊ အလွန်မူရင်း၊ လုပ်ရန်အလွန်မြန်သည်
တစ် ဦး ချင်းစီကုလားကာခြေလှမ်းလုပ်ပါ
သင်သည်သင်၏အခန်းကိုမူလပုံစံဖြင့်အလှဆင်လိုပါက decoupage နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ထည်အက္ခရာများဖြင့်ပန်းချီဆွဲရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မလွတ်ပါစေနှင့်။
အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ 3D အက္ခရာများနှင့်ချိတ်ဆွဲရန်
ဒီသင်ခန်းစာမှာကလေးငယ်တွေအတွက်အိပ်ခန်းသုံးဖို့အကောင်းဆုံးအက္ခရာပါတဲ့ 3D အက္ခရာများနှင့်ချိတ်ဆွဲရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်၊ အသေးငယ်ဆုံးနှင့်တောက်ပသောအရောင်များ၏ကန ဦး ကိုထည့်ပါ။
ဒီသင်ခန်းစာမှာအိုးတွေကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်ပျော်စရာခရုတစ်ခုဖန်တီးဖို့တစ်ဆင့်ချင်းစီသင်ပြမယ်။ သူတို့ကိုအရောင်စုံများစွာဖြင့်ပြုလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်၏အပင်များကိုရှင်သန်စေလိမ့်မည်။
styrofoam cone ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူလုပ်နည်း
ကတ်ထူပြားနှင့် Eva Gum ပန်းများပြုလုပ်နည်း
မင်းပန်းပွင့်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းကဒီအဆင့်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကြိုက်မှာပါ။ သင့်အိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်ကတ်ထူပြားနဲ့ Eva Gum ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါပြမယ်။
မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ပျိုးခင်းကိုရိုးရှင်းသောပလတ်စတစ်ပြားဖြင့်အလှဆင်ပုံကိုလေ့လာပါ။ ရလဒ်သင်အံ့အားသင့်ပါလိမ့်မယ်။
သိုးမွှေး pom pom keychains လုပ်နည်း
အိတ်များ၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ (သို့) သင်၏သော့များကိုသာအလှဆင်ရန်သိုးမွှေး pompoms ဖြင့်သော့ချိတ်များကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြုလုပ်ပါ။
၀ ိုင်ပုလင်းတစ်ခွက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်တောပန်းအိုးလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တော့မယ်။ အိမ်၏မည်သည့်ထောင့်ကိုမဆိုအလှဆင်နိုင်သည်။
သင်၏အိမ်အတွင်းရှိပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမွမ်းမံရန်အတွက်တောက်ပသောဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူများကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောခြေလှမ်းကိုလှမ်းကြည့်ပါ။
ပြားချပ်ချပ်သစ်သားတုတ်နှင့်အတူ trivet လုပ်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာမှာသစ်သားတုတ်ပြားတွေနဲ့ trivet တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုအလှဆင်ရန်အတွက်သင်သည် decoupage နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်လည်းသင်ယူနိုင်သည်။
Mosaic Faux ရွှံ့စေးပြားများပြုလုပ်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာမှာရွှံ့စေးပြားပုံဖော်ထားတဲ့ mosaic ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာလုပ်ရန်နှင့်၎င်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။